१५ देखि २० मिनेटको रोलले रातारात स्टार
बलिउड चलचित्र ‘जय सन्तोषी माँ’ सन् १९७५ मा प्रर्दशनमा आएको थियो । उक्त चलचित्रमा सन्तोषी माँको भूमिका अनिता गुहाले निभाएकी थिइन् । अनिताको चलचित्रमा १५ देखि २० मिनेटको रोल थियो । अनिताले कहिले पनि सोचेकी थिइनन् कि चलचित्र बक्स अफिसमा चल्नेछ । तर यो चलचित्रले पछि रेकर्ड तोड कमाई गरेको थियो । उक्त एक चलचित्र ले अनिता रातारात स्टार बनेकी थिइन् ।
उक्त चलचित्रको २० मिनेटको रोलले उनलाई वास्तवमा नै देवीको दर्जा दिएको थियो । अनिताले आफ्नो करियरको सुरुवात १५ वर्षको उमेरमा गरेकी थिइन् । अनिता गुहा मिस कोलकाता बनिसकेकी थिइन् । त्यसपछि उनी मुम्बईमा एक ट्यालेन्स शो मा भाग लिन गइन् ।
यता बाटै उनको बलिउडमा प्रवेश भयो । अनिताले एक बंगाली चलचित्र ‘बान्शेर केला’ बाट आफ्नो डेब्यू गरे । त्यसपछि उनले ‘छुमन्तर’ चलचित्रमा काम गरिन् । अनिता चलचित्रकी साइड हिरोइन थिइन् । बिस्तारै बिस्तारै अनिताको करियरले गती समात्यो । यद्यपी, अनितालाई हिन्दी आउँदैनथ्यो । अनिताले निकै चाँडै हिन्दी सिकिन् । यसै बिच अनितालाई चलचित्र ‘सन्तोषी माँ’ मा क्यामियो गर्ने मौका पाइन् । अनितालाई त्यतिबेला ‘सन्तोषी माँ’ नामकी देवी पनि हुन्छन् भन्ने थाहा थिएन । अनिता बंगाली भएका कारण काली माँ लाई पुज्ने गर्दथिन् । अनिताले चलचित्रको सुटिङ १२ दिनमा पूरा गरिन् ।
चलचित्रको सुटिङको क्रममा अनिता ब्रत बस्थिन् । लो बजेट चलचित्र हुँदा पनि यो एक ब्लकबस्टर चलचित्र बन्यो । चलचित्रसँगै अनिताको चर्चा निकै बढ्यो । जसले यो चलचित्र हेर्न जान्थे, उनीहरु हल बाहिर चप्पल फुकालेर भित्र जान्थे । हलमा प्रसाद पनि बाँडिनथ्यो । अनिताले एक अन्तर्वार्तामा भनेकी थिइन्, ‘मानिसहरु म भए ठाउँ आएर उनीहरुको टाउकोमा हात राखेर आशिर्वाद दिन भन्थे ।’ मानिसहरु उनलाई देवी जस्तै पूज्ने गर्दथे । विशेष कुरा के छ भने यसै फिल्मपछि मानिसहरु ‘सन्तोषी माँ’ लाई पूजा गर्न थालेका थिए ।
अनिता आफ्नो देवीको इमेजबाट खुसी थिइनन् । त्यसकारण उनले अन्य चलचित्रमा काम गरिन् तर फ्लप भइन् । अनिताले नायक मानिक दत्तसँग विवाह गरेकी थिइन् ।
कोरोनाविरुद्ध राहत कोषमा अक्षयको २५ करोड सहयोग
'भिष्मा'को हिन्दी रिमेकमा रणवीर
३५औं जन्मदिन मनाउँदै रामचरण
‘जनता कर्फ्यू’को आह्वानलाइ रजनीकांतको समर्थन
सेल्फ क्वारेन्टाइनमा सेलिब्रेटी
अस्पतालमा पनि स्टारपन्ती देखाउदै कोरोना संक्रमित कनिका
एक्सन अवतारमा शाहरुख
रणवीर र आलियाको ब्रेकअप ?
एलिजाद्दारा ट्रोल कलिउडविरुद्ध साइबर क्राइमको मुद्दा?
आर्टिष्ट खबर/ चैत, काठमाडौं । चर्चित सञ्चारकर्मी ऋषि धमलाकी पत्नी एलिज
आर्टिष्ट खबर/ चैत, काठमाडौं । यतिबेला देश पूर्ण रुपमा लक डाउनमा छ । वि
आर्टिष्ट खबर/ चैत, काठमाडौं । आज मार्च १८ बाट नायिका आँचल शर्मा २५औँ ब